Glass Khombisa IKhabhinethi, Metal isibonisi umbhoshongo Umbukiso, Umbukiso Ngokhuni - Yujin
Glass isibonisi iKhabhinethi
Glass isibonisi esiphikisayo
Glass isibonisi umbhoshongo
Glass ujikelezisa isibonisi
Metal & Umbukiso lokhuni
isibonisi kabili emaceleni
isibonisi Single emaceleni
Jewellery isibonisi esiphikisayo
Slat odongeni isibonisi
Wall ukukhwezwa isibonisi
Ngokhuni ingilazi esiphikisayo
Ngokhuni odongeni isibonisi
Mahhala ukuma aluminium ingilazi isibonisi sikhangise morden ingilazi iKhabhinethi for esitolo
Umakhalekhukhwini esitolo ingaphakathi design ukubonisa iKhabhinethi ingilazi esitolo ukubonisa Umbukiso
New Design Lockable Jewelry Khombisa IKhabhinethi Imihlobiso Glass Khombisa IKhabhinethi Nge IKhabhinethi Isitoreji
Ukukhanyisa lockable ingilazi isibonisi iKhabhinethi nge isitoreji
Kwenziwe ngentando-design-izinkuni ingilazi-esiphikisayo aluminium nengilazi
Rotatable LED esikhanyayo ingilazi isibonisi iKhabhinethi nge 3 omnene ingilazi emashalofini
Ngokhuni odongeni ukubonisa futhi iwayini elenziwe ngokhuni nensimbi Racks
Ngokhuni ifenisha Iwayini isibonisi yokubeka ekhaya ukusetshenziswa elinethebula futhi usofa
iwayini ngokhuni nensimbi Racks
Slatwall uhlanganyela lokhuni Ucingo phone izesekeli isibonisi iKhabhinethi
lokhuni isibonisi igridi Cubbies for Wezingane imodeli amathoyizi iqoqo
Ulenga slatwall isibonisi iKhabhinethi esetshenziselwa umakhalekhukhwini izesekeli
Ngokhuni nensimbi ukulengiswa sesibuko esitolo
ngokhuni nensimbi ingubo yokubeka izinto zokugqoka kanye nezicathulo ukubonisa esitolo
Safe futhi umthombo esobala impahla.
Izinto ezikhethiwe imikhiqizo emihle ukhuni kwezinkuni baye bakhethwa ngokucophelela.
Ayikho ukudayiswa premium, ungathenga akhululeke.
Titanium ingxubevange ukuveza futhi lokhuni ingilazi ukuveza kukhona imikhiqizo iwuhlelo yenkampani. I yendwangu aluminium kuhlotshisiwe, wafutha futhi kuhlinzwa. Umbala kuxhopha, umbala kuxhopha, ukuthungwa metal unothile, futhi inhlanganisela umlilo iphaneli ifaniswe umbala kungaba Mak ...
Indima 6 ezahlukene isitayela ukuveza
izitayela ezahlukene ukuveza, osayizi ezahlukene ukuveza, babe izindima ezahlukene esitolo. Zanamuhla umcebo Umbukiso kuyofika nawe ukuze ubone ukuthi wemasayizi izitayela ezahlukene ukuveza ukudlala esitolo. iKhabhinethi 1.High Imboni ubizwa nangokuthi iKhabhinethi emuva, h ...
Indlela ukukhetha Umbukiso, ngeke behlupheka!
Njengamanje, ungakhetha izindlela ezintathu ukuthenga Umbukiso: ukuthenga ejwayelekile; ukwenza yesehlakalo; ngokwezifiso Umbukiso. Lapho uziqonda emihle nemibi ngamunye ezintathu lezi ongakhetha, uzothola ukuthi uma ukhetha ngokwezifiso Umbukiso, wena namanje isihlobo ...
Khombisa iKhabhinethi ukuthenga indlela
Ukuze gqamisa kangcono isibonisi umphumela isibonisi amakhabethe isibonisi imele, abantu kufanele sibe namahloni uma uthenga isibonisi amakhabethe isibonisi imele. Kufanele uthenge ngokuvumelana nezidingo imikhiqizo ukubonisa. Nakani amaphuzu alandelayo uma uthenga: 1. ...
Guangzhou Yujin Shelf Co., Ltd. kuyinto nomkhiqizi esibulalayo onguchwepheshe design, R & D, yokukhiqiza, yokuthengisa emva-sales service of ukuveza futhi emashalofini. Kuye kwaba embonini iminyaka eyishumi. Le nkampani ine unqambothi ashukumisayo ithimba wahlanganyela ekucwaningeni nasekuthuthukeni, yokuthengisa, ukuphathwa kanye inkonzo, njalo Innovating amandla umthombo entsha bese olusha.
Glass isibonisi iKhabhinethi, Glass Door IKhabhinethi ,
Igumbi 105, No.2-4, Okwesithathu Imboni Road, Chongkou viliage, Dashi emgwaqweni, Panyu wesifunda, Guangzhou, China